Uploaded by phoparlay
မှောင်ရိပ် အပိုင်း-1-2 (စ+ဆုံး)
126638206 Kyaw Kyaw Kyae Zoo Shin
Boe Daw Kyone Tway. Boo Tha Hmya
ko yin mg
500. ပန်းနဲ့ရေးတဲ့ ပုံပြင်
dobinpokin( အချစ်တက္ကသိုလ် )ဆင်ကြီး ဂဋ္ဌုန်ချီ
Channko and His Friend Full
Asia Peace Confrance
26117799 China and Indian Ocean by Khin Ma Ma Myo
2010 Burmese Labor Strike - Burmese
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား စကားပြောခွင့်ရတဲ့aတွက်
Win Tin Birthday
Urban Guerrilla (Short Story) by Khin Ma Ma Myo
2010 Burmese Labor Strike - English
Authoritarian Elections by Khin Ma Ma Myo
Justice and Services by Khin Ma Ma Myo
Thu Kha.di Saung Hay Man
24048960 Ko Min Ko Naing Short Story
Burmese Newspaper History
Byie Ashin Pei Ni
National Liberation Struggle by Free Burma Federation
စစ်ဗိုလ်ကတော်ခင်မမသည် ကတုံးမကလေးကို နှာခေါင်းရှုံ့၍ကြည့်၏ ငွေငါးဆယ်များနေ သလားဟု စိတ်ထဲက တွက်ချက်ကြည့်လျက် နှာမြောသလိုလိုတွန့်တိုနေလေသည်။ နှမြော မည်ဆိုလည်း နှမြောပေမည်၊ ဆယ်တန်ငါးချပ်သည် ပိုကာဝိုင်း၌ တနေကုန်တနေ ခန်းခါးချိအောင် ထိုင်ရိုက်ရသောငွေဖြစ်သည်။ ဖဲဝိုင်း၌ တနေ့ခင်းလုံးရှုံးနေသည်။ ပါလာသော ငွေ (၁၀၀)ကျပ်ကုန်၍အတွင်းဝန်ကတော်တဦးထံက(၃၀)ကျပ်လှည့်ပြီး ဆက်ရိုက်နေစဉ်၊မင်း ကတော်များရှေ့တွင်ဣနြေ္ဒမပျက်အောင် ဆဲမိသေးသည်။ ဒေါသကြောင့်လက်ထိပ်က ချဖဲကိုမမြင်ဘလျှမ်းနေသည်။ ရင်ထဲကလည်းတလှပ်လှပ်ဖြစ်ကဲာမွှန်နေသည်။ အသက်ရှူရပင်ကျပ်လာ၏ ကံကောင်းထောက်မ၍တဖြည်းဖြည်းငွေ(၁၀၀)ကျပ် အရင်းပြန်ပေါ်ကာ ငွေ(၃၀)ကျပ် အကြွေးကို ဆပ်နိုင်လိုက်ရုံမက ငွေ (၅၀)ကျပ် အမြတ် ထွက်လျှက် အနိုင်နှင့်ပြီးလိုက်ရ၏။ ခင်မမသည် ဖဲဝိုင်းအပြီးမြေကြီးနှင့်ခြေမထိဘဲ ၀ဲပျံသာွးလျှင်ရတော့မလောက်ပေါ့ပါးသွားသည်။ ဟန်ဆောင်ပြီး ရိုက်နေရ၏ လက်ကိုင်အိတ်တဲ ရာတန်ထည့်ယူခဲ့ရပါ့မလားဟု နောင်တရလို့မဆုံးဘယ်သူမှမသိကြ၍သာ၊ သူ့ကိုယ်သူလည်း
ရွှင်မြူးနေ၍ အသံမှာ နဂိုအသံမဟုတ်တော့ဘဲ အူထကအသံထွက်လာသည်။ “ခင်တောဲ့အိမ်ရောက်ရင် အိပ်ရာထဲခွေရတော့မယ် အောက်မေ့တယ်...တော်ပါသေးရဲ့...ဟဲ-ဟဲ-ဟဲ” ရယ်မောသံများ စည်စည် ပွင့်လင်းစွာ အားရပါးရကြီး ရယ်မောချလိုက်လေသည်။“ခင်တော့ပွတာပဲ...ကိုယ်တော့ မီးယပ် ချမ်းထနေပြီ...”မင်းကတော် စိုးကတော်၊သူဌေးကးတော်တို့၏ ကားကား ထွက်ပေါ်နေစဉ် မီးကို ရေနှင့်ဖြန်း သကဲ့သို့ ရုတ်တရက်တိတ်သွားကြ၏။ ဖဲဝိုင်းလုပ် နေသော ထမင်းစားခန်းထဲသို့ ခပ်၀၀မိန်းမကြီး တယောက်ဝင်လာသည်။ သနပ်ခါးဘဲကျားနှင့် သားမဲမ၀၀တုတ်တုတ်ကြီး၊ဲမိန်းမ၀၀ကြီး၏ ကိုယ်ကလေး ဗိုက်ကြီးမှာရှေ့သို့ တတောင်လောက်ချွန် ကပ်ပါ နေသည်။ လာလေသည်။ အရိုးပဒေသာ စက်စက်သည် (၃)ပေလောက်မြင့်သော ကတုံးပြောင်ကလေးနှင့်ခလေးမ ပိန်ပိန်သေးသေး ကလေးသည်။ ပေါင်တဘက်ကထမီစကို တခြမ်းသာ ပေါ်တွင် ဆွဲကိုင်လျက် မင်းကတော်များမှာ မိန်းမကြီး၏ ပေါင်လုံးကွယ်နေ၍တွယ်ကပ်ပါလာသောကတုံးမကလေးကို မြင်ကြရသည်။အသားညိုညို၊ ပိတ်ရှင်မီး၊ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ အသစ် ကိုယ်လုံးကလေး ရေမလျှော်ရသေးသော
ကိုယ်ပေါ်၌အဆမတန်ချောင်နေကာ ရှင်မီးကြိုးမှာ လက်မောင်းအရိုးပေါ် ကျနေ၏ ခါးက ထမီသည် ထမီ ဆင်နှင့်မတ။ူ အသားရိနေသော အ၀တ်ပိုင်းဟောင်းစ တခုကို ဂွင်းချုပ်ဝတ် ပက်ထားကာအဆင်းလည်းမရှိ၊ နှင့်တော့ ပြူးစိုက်၍ အရောင်လည်းမရှိ၊ မဲညစ်နေသဖြင့် အထက်ကရှင်မီး ပါးနီ၊ အရောင်ကွဲခြားနေသည်။တကိုယ်လုံးတွင် ကြည့်နေ၏ “ဒီဟာမလေးလား” မေးလိုက်လျှင် ဟု မျက်လုံးသာလျှင်ပေါ်လေ၏
နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလျှက် ဆံပင်များဖွာလံတွန့်ကောက်ထားသော မင်းကတော်တွေကို ခပ်ရိုင်းရိုင်း ခင်မမဘေးတွင်ရပ်နေသော ခပ်၀၀ကြီးသည် အရေးပိုင် ကတော်ကမျက်မှောင်ကြုတ်၍ နေသောသွားများကိုဖော်ကာ မိန်းမ ရှားရောင်ပေါက်
ပါ...”“မလိုချင်ပါဘူတော်...”ဟု အရေးပိုင်ကတော်က ခေါင်ခါလျှက်မဲ့ပြောလိုက်သည်။ ကတုံး မလေးသည် သူ့အားဝိုင်းကြည့်နေသော မျက်လုံးများကို မခံရပ်နိုင်၍ထမီစကိုမြဲမြဲဆုပ်လျက် တင်ပါးကြီး နောက်တင် မျက်နှာကပ်ကာ ကွယ်ဖွက်ထားလိုက်သည်။ “ဒီလက်မလောက်ွကလေး ဘာလုပ်ရမလဲ...”ဟု အတွင်းဝန်ကတော်ကဆို လိုက်ရာ “ကြီးလာအောင် အနွံအတာခံပြီး မွေးထားရအုံးမဲ့ တာဝန်ကမသေးဘူး..”ဟု သစ်စက်သူဌေး ကတော်လေး က ထောက်ခံလိုက်သည်။သူတို့အထဲတွင် ဆံပင်ဖြူနေသော လွှတ်တော် ရှေ့နေက တော်ကြီး သည် တယောက်တခွန်း စီးကရက် ထင်မြင်ချက် တလိပ် ပေးနေကြ သည့်အထဲ၌ ကုလား မပါဝင်ဘဲငြိမ် ထိုက်နောက် နေ မှီနှင့် သည်။အတန်ကြာမှ ရုတ်သိမ်း၍ ရှေ့နောက်မြှော်မြင် တွေးတောစဉ်းစားနေသော အမူအယာများကို
တသက်လုံးခိုင်းဖို့ပိုင်တာ၊ ငယ်လဲခဏပေါ့။ စောင့်ရလှ(၁)နှစ်(၂)နှစ်ပါ၊ (၈)နှစ်(၉) နှစ်လောက် ဖြစ်လာယင် ပန်းကန်ဆေး၊ သနပ်ခါးသွေး၊ အ၀တ်ဖွတ်၊ ကြမ်းတိုက်ရရောပေါ့၊ အန်တီကခ လေးမြေးငယ်မရှိလို့၊ ရှိရင်သူတို့နဲ့အဖေါ်ရအောင်ဝယ်ထားလိုက်မှာဘဲ” ခင်မမသည် ဖြတ်ကနဲ အိမ်က မိုက်ကယ်နှင့်လီလီကို သတိရလိုက်သည်။ မိုက်ကယ်မှာ(ရ)နှစ်သား ကလေးဖြစ်သည်။ လီလီမှာ(၁၀)နှစ်သမီးဖြစ်သည်။ မခင်ကြပေ၊ ဆယ်လေးငါးနှစ် ခလေးတွေမှာ အိမ်ကထမင်းချက်သော အမယ်ကြီးကို
လည်းများလှပြီ။ ခလေးတွေက ဆိုးလွန်းသောကြောင့် ဒဏ်မခံနိုင်ကြဘဲ တလနှစ်လနှင့်ထွက်
“ဘယ်လောက်လဲ”ခင်မမသည် ဈေးထဲ၌ ဘဲကောင်ကိုဝယ်သည့်အခါ ရင်အုံနှင့်ပေါင်တံတို့တွင် အသား များမများ တို့ဖိ ကြည့်သလို တင်ပါးနောက်က ကိုယ်တခြမ်း ထွက်ပြူလာသော ကတုံးမလေး၏ ထုတ်ရအောင် လက်မောင်းနှင့်ပေါင်တံတို့ကို လက်တဘက်က နောက်ပြန် မျက်စိကစားရင်း ပစ်လျက် မေးကြည့်လိုက်သည်။ ပုနေသော “၅၀ကျပ် ပါရှင်...” မိန်းမ၀၀ကြီးသည် အားတက်ကာ ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ၀ယ်သူအား တင်ပါးနောက်၌ ကတုံးမကလေး၏ ဂုတ်ကို ဆုတ်ကာ ကိုယ်ရှေ့သို့ ဆွဲထုတ် လိုက်လေ၏ ကတုံးမကလေး သည် ရုန်းရင်းလိမ်ရင်းပါလာကာ ချွန်ထွက်နေသော ဗိုက်ပူကြီးကို ကပ်ဖဲ့ကပ်ဖဲ့ဖြင့်ပင် အတင်း ကပ်မှီနေပြီးနောက် မည်သူ့ကိုမျှ မကြည့်တော့ဘဲ မျက်နှာကိုငုံ့ထားသည်မိန်းမ၀၀ကြီး၏ ဗိုက်ကို မှီရပ်တယ်ကပ်နေသော ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် “ပစ္စည်း”ကိုဝိုင်းကြည့်ကြရင်း အားလုံးလွိုလိုပင် စိတ်ပျက်ကြသည်။ ငွေ ၅၀ ကျပ်နှင့်တန်မတန်တွန့်နေသော ခင်မမပင် နှာခေါင်းရှုံ့၍ နေလေသည်။
“ဖအေမအေလည်းမရှိပါဘူး၊ ဆွေမျိုးလည်းမရှိပါဘူး၊ မုးဒုံဘက်ကပါ၊မွေးခါစက သနားလို့ ယူပြီးမွေးထားတဲ့ အဖိုးကြီးလည်းသေသွားပြီ၊ အမယ်ကြီးမမာလို့မမွေးနိုင်တာကြောင့် အိမ်ကောင်းယာကောင်း ပို့ခိုင်းတာပါ...” လူအရောင်းအ၀ယ်ကို ကျင်လည်ပါးနပ်စွာ ကုန်ကူး နေသော မိန်းမကြီးသည် ခေါ်ထားသည့်ဈေးနှင့် တည့်အောင် ရောင်းပန်း မလှသောပစ္စည်းကို တွန်းရောင်းနေရလေ၏။ ခြောက်ခြောက် ဖြစ်နေသည်။ “မလျှော့ဘူးလားရှင် ၃၀ကျပ် လောက်နဲ့ မရဘူးလား....”ခင်မမသည် မိန်းမကြီးကိုပြောပြီး အိမ်ရှင်အရေးပိုင်ကတော်ကို ဆစ်ပေးရန်မျက်လုံးဖြင့် စစ်ကူတောင်းလိုက်သည်။ အရေးပိုင်က တော်ကား လူရောင်းလာသောမိန်းမ၀၀ကြီးထက် အရည်အချင်းတပန်းသာဖြစ်၍ သွယ်ဝိုက် သောနည်းဖြင့် ဖိနှိပ် နင်းဆစ်ပေးလိုက်သည်။ ညီးဟကလည်း “ခင့်နှယ်...ဘာလုပ်ဖို့များ ၃၀ကျပ် ပေးယင် လိုချင်ရ တာလဲ...လက်မလောက်ဟာကို မခိုင်းရ မစီးရ ဒုက္ခသုက္ခခံလို့ မွေးရမှာ၊ ကိုယ်သာ ဆိုရင် အလကားမွေးပါဆိုတောင်မယူဘူး၊ လောက်ရလျှင်ပေးခဲ့မယ်ဟု ဈေးကိုင်မနေနဲ့၊ တော်တော့ ညီးဟာမ လေးကို ဘယ်သူကမှ ယူမှာမဟုတ်ဘူး...သိရဲ့လား” ၁၀ ကျပ် မှန်းခဲ့သော မိန်းမကြီးသည် နုံချာကြောက်ရွံ့ရိုသေလှသော ခင်မမသည် အိတ်ထဲကငွေနှင့် သာဆိုလျှင် သည်လိုပိန်ပိန် သို့သော် (၃)ပေလောက်ဟာကလေးမျိုးကို ၀ယ်ဖြစ်ချင်မှ ၀ယ်ဖြစ်မည်။
အရှုံးထဲက အမြတ်ပြန်ထွက်ထားသော ငွေ၅၀ ကျပ် ပင်ဖြစ်၍လဲယူရန် အောင့် သက်သက်
ဟန်ပေးလျက် မျက်နှာထား ကြီးနှင့် ပြောလိုက်သော အရေးပိုင်ကတော်ကို ရှိခိုးဦးတင်ပြန် ပြောလိုက်သည်။ “ဈေးမကိုင်ဝံ့ပါဘူးမမရယ်...ပေးတဲ့အတိုင်း တိုးမပြောပါဘူး...ကျမက ကြား ထဲကပါ... ဟိုအမယ်ကြီး တဘက်သားလဲ ဆေးဘိုး ၀ါးဘိုးလေးဘဲရရ သက်သက် ဆောင် ရွက်ပေးချင်လို့ မလေးသည် ဆွလာတာပါ၊ဲမဲ့နေရာမှ မမကဒီလောက်နဲ့တော်ဆို မှ...တိုးမပြောရဲပါ မသိ ဘူး”ကတုံး စာပွဲပေါ်သို့ ဘယ်ကပေါ်လာမှန်း ခုန်တက်လိုက်သော
ကြောင်နက်ကလေးကို ငေးစိုက်ကြည့်နေကာ ဘာတွေကို ပြောဆိုနေကြမှန်းမသိတော့ပေ။ ကြောင်နက်ကလေးသည် စာပွဲပေါ်တွင်ခွေလျက် လည်ပင်းယား၍ လက်ကလေးတဘက်နှင့် ကုပ်နေသည်ကို စိုက်ကြည့်နေလေသည်။ အရေးပိုင်ကတော်သည် ကြောင်နက်ကလေးကို ပွေ့ယူချီလိုက်ကာ ရင်ခွင်တွင်ထွေးပိုက် ထားလိုက်သည်။ကြောင်နက်ကလေး အရေးပိုင်က တော် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သွားမှ မျက်စေ့လွှဲသွားကာ ခင်မမအားတလှည့် မိန်းမ၀၀ကြီး လှမ်းယူ လိုက်သောငွေစက္ကူကိုတလှည့်ကြည့်နေပြန်၏ “ခင်ပြန်တော့မယ်...ကလပ်ကို အခန်းထဲမှ ကားလွှတ်ရအုံးမှာ...အားလုံးဘဲပြန်မယ်နော်...”ခင်မမသည် ခင်မမနောက်မှ မိန်းမ၀၀ကြီးသည် အိမ်ရှေ့ ကတုံးမကလေး ဆင်ဝင်အောက်ရှိ မျက်ရိပ်ပြလိုက်
လက်ဆွလျက် လိုက်ခဲ့ ကာ ကြောင်နက်ကလေးကို ပွေ့လာသော အရေးပိုင်ကတော်နှင့်ဲအခြားကတော်များက ကားထဲသို့မ၀င်ခင် နောက်ဆုံးက ထွက်လိုက်လာကြ၏ ခင်မမသည် ကတုံးမကလေးကို အရင်တင်ပေးရန်
သည်။“တက်...ကားပေါ်တက် ကားကြီးစီးပြီး ဟိုဈေးမှာ မုန့်သားဝယ်ပေးမှာ၊တက်လေ...”ွကားကြီးထဲ မ၀င်ဝံ့သဖြင့် မျက်လုံးများပြူးကာ အသံမထွက်ဘဲ ရုတ်တရက် အကြောက်အကန် ရုန်းယင်း မန်းမကြီး၏ ပေါင်တံအား တအားဖက်ထားပုံကို ၀ိုင်းကြည့်ကြလျက် ၀ါးကနဲ ရယ်ကြလေသည်။ မိန်းမကြီးက ပခုံးကလေးနှစ်ဘက်ကနေ၍လက်နှင့် ဆုပ်မ လိုက်ပြီးလျင် ကားထဲသို့ ထိုးသွင်းထည့်လိုက်ကာ ဂျိုင်း ကနဲ တံခါးကြီးပိတ်ပစ်လိုက်မှ ၀ါးကနဲ ငိုသံ ထွက် လာသည်။ ခင်မမသည် ပြုံး၍ ရှေ့မှဒရိုင်ဘာဘေးတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ကာ ကားတံခါးကို ပိတ်လျက် ကားမထွက်ခင်အားလုံးလက်ပြ၍ ရွှငရွှင်ပြုံးပြုံ်းနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အညောင်းဆန့်ရန်ကုတင်ပေါ်သို့ ပစ်လှဲလိုက်ပြီးလျှင် အပြင်ခန်း တွင် တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသော က လေးမကို အခန်းထဲသို့ ခေါ်သွင်းလျက် စစ်ဆေးကြည့်၏ “ပြောလေ...မေးနေ တာ““ငါ ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်... “ဟု အသိဥာဏ်ဖြင့် မစဉ်းစားနိုင်သေးဘဲ၊ မှန်ကားကြီးထဲထည့်ကာ တံခါးအလုံပိတ်မောင်း လာ၍ သေလုမြောပါးကြောက်လန့်သွားသည့်အရှိန်မှာ ကောင်းကောင်း မပြေတတ်သေးသဖြင့် ရုတ်တရက်အဖြေမပေးနိုင်ဘဲ ရှိုက်၍ ငိုနေလေ၏ “ဒီနားတိုးခဲ့စမ်း...” အမိန့်ပေးသောအသံသည် ပြင်းထန်လှသဖြင့် တကိုယ်လုံးတုန်သွားကာ ကြောက်ကြောက် ရွံ့ရွံ့ ဖြင့် ကုတင်နားသို့ တိုးကပ်လာသည်။“မေးနေတာပြောလေ၊ နံမည်မေးတာပြော၊
နင့်နံမည်က ဘယ်သူလဲ...” “ညှပ်စိ” ကလေးမလေးက နောက်တကြိမ်ထပ်ပြောမှ နားထဲတွင် သဲကွသွားလျက်ဲခင်မမသည် “ညှပ်စိ... အမယ်လေးဟဲ့”ဟု အလန့်တကြားပင် အော် လိုက်ကာ မျက်နှာကြီးရှုံ့နေ၏ မွေးနေ့ပါတီက ပြန်လာကြသော မိုက်ကယ်နှင့်လီ လီတို့ သည် အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာကြသည်။ “မာမီ...မာမီ”ဟု အော်ခေါ်လာသော အသံများကား ဆူညံသွားသည်။ မိုက်ကယ်သည်
ဖိနပ်မချွတ်ဘဲ ခုတင်တိုင်ပေါ်သို့ ခုန်တက်လာ၍ ခင်မမက ထလှမ်းဆွဲလိုက်သည်။ လီလီသည် ခုတင်တိုင်ကိုကိုင်ကာ “ညှပ်စိ”အား ခြေဆုံးခေါင်းဖျား ထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်လိုက်၏ ညှပ်စိ သည် လီလီ၏ခေါင်းပေါ်၌ ခွေလိမ်နေသောဆံပင်နှင့်နှုတ်ခမ်းနီပါးနီခြယ်ထားသော မျက်နှာ ကိုပြူးစိုက် ကြည့်နေသဖြင့် မနှစ်မြို့သလို နှုတ်ခမ်းစူပြလိုက်ကာ “မာမီ...သူကဘယ်သူလဲ”ဟု မေးလိုက်သည်။ မိုက်ကယ်သည် ခင်မမကျောကို ပိုးစီးထားလိုက်ကာ လည်ပင်းအစ်လောက် အောင်ဖက်ထားသဖြင့် လက်ပြုတ် အောင် ကြိုးစား၍ မနဲဖြုတ်နေရင်း “သမီးတို့ခိုင်းခိုင်းဖို့ ၀ယ်လာတာ”ဟုဆိုလိုက်၏ မိုက်ကယ်သည် ညှပ်စိအားကြည့်လျက် မျက်နှာရှုံ့၍ “သားသား ခိုင်းဖို့ရောမ၀ယ်လာဘူးလား...ဟု ခင်မမကျောကို လက်သီးဆုပ်နှင့် တဘုံးဘုံး ထု ပြော လေ သည် “အတူတူပေါ့သားရယ်. ..အတူတူခိုင်းကြပေါ့”ဟု အထုခံရင်း ချော့ပြောရသည်။ “မာမီ... သူကဘယ်ကလဲ” လီလီသည် အထပ်လိုက် အထပ်လိုက်ကြွဖောင်းကားနေသော ခြေထောက်ကလေးများ ဂါဝန် အောက်ပိုင်းကိုပင့်လှန်၍ ခုတင်ပေါ်ထိုင်ချကာ လှုပ်ရမ်းလျက်
စိတ်ဝင်စားစွာစစ်ဆေးမေးမြန်းနေ၏ “ဘယ်ကမှန်း ဘယ်သိမလဲ၊ ဟဲ့...နင်ဘယ်မှာမွေးသလဲ”ခင်မမ မေးနေလည်း မေးမေးပင်၊ ညှပ်စိမှာ မေးတာကို နားလည်သလိုရှိသော်လည်း၊ ဘယ်မှာမွေးမှန်း မသိသဖြင့် ကြောင် ထောင်ကြီးပင် ကြည့်နေ၏“နင့်ကိုမွေးတဲ့နေရာ နင်မသိဘူးလား...”ညှပ်စိသည် ခင်မမအား ကြည်၍ ခေါင်းခါလိုက်သည်၊ လီလီနှင့်မိုက်ကယ်လည်းပြိုင်တူရယ်လိုက်ကြသည်၊ ညှပ်စိသည် မျက်နှာညှိုးသွားကာ မိုက်ကယ်အား မျက်စောင်းထိုး၍ ကြည့်လျှင် မိုက်ကယ်၏ မျက်နှာ ပေါက်ဆိုးဆိုးနှင့် လက်သီးကိုမြင်လိုက်ရ၍ ချာကနဲ မျက်လုံးကို ရုပ်သိမ်းပစ်လိုက်သည်။ “မာမီ...သူ့အဖေရော အမေရော မရှိဘူးလား...” ခင်မမသည် လီလီ၏ဂါဝန်နောက်ကျောမှ ကြယ်စိများကို လှမ်းဖြုတ်ပေးနေရာမ “နင့်အဖေအမေ မေးနေတယ် ...ပြောလေ”ဲဟုငေါက်ပြောလိုက်သည်။ ညှပ်စိသည် မိုက်ကယ်ကို မကြည့်တော့ဘ၊ လီလီနှင့်ခင်မမကို သာတလှည့်စီကြည့်လျက်နေ၏ “မေးတာပြောလေ...” လီလီကအော်ငေါက်လိုက်သည်၊ ညှပ်စိ သည် လီလီကိုမျက်စောင်းထိုးလျက် ဆီမန်းမန်းသလို နှုတ်ခမ်းများက လှုပ်လေ၏ မိုက် ကယ်နှင့်လီလီသည် မှထ၍ ညှပ်စိပုံပန်းကိုကြည့်လျက် စိတ်ဆိုးနေမှန်းသိကြသဖြင့် ညှပ်စိဘက်သို့လှည့် ပို၍စိတ်ဝင် ကာ“ မေး စားကာ “မာမီ...မေးတာမပြောဘူး”ဟု ပြိုင်တူတိုင်တန်းကြသည်။ ခင်မမသည်ခု တင်ပေါ် လီလီ၏ဂါဝန်ကို အထက်သို့လှန်ချွန်ယူလျက်
တာပြော”ဟု ထပ်အော်လိုက်၏ ညှပ်စိသည်မျက်နှာပုပ်ပုပ်ဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှမကြည့်ဘဲ ကြမ်းကို စိုက်ကြည့်ကာ မဖြေဘဲနေ၏ ခင်မမသည် “အာဂလာတဲ့ကောင်မလေးပါလား...” ဟုထောင်း ကနဲဖြစ်သားကာညှပ်စိရှေ့၌ခါးထောက်ကြည့်လိုက်၏ွသည်။ ဖြန်းကနဲအသံထွက်လျှင် အသံထက်အောင်ွအရယ်ရပ်သားကွာအော်ငိုလိုက်သည်။ “ညှပ်စိ...” ညှပ်စိအား “ဘာတုန်း...”ဖြန်း... စိုက်ကြည့်နေကြပြန်၏ ညှပ်စိ၏ နာမည်ကိုကြား၍လီလီသည် တခစ်ခစ်ရယ်နေလေသည်။ မိုက်ကယ်လည်းလိုက်ရယ် ညှပ်စိသည် ဖြန်း...ဖြန်း...ဖြန်း...ဤအကြိမ်တွင်
သုံးချက်ဖြစ်သွားသည်။ ထိုသုံးချက်သည် ညှပ်စိအား နောက်ထပ်အသံ မထွက်ဝံ့တော့ချေ။ “တိတ်...ကောင်းကောင်းပြော...နင့် အဖေအမေ ဘယ်သူလဲ...”ညှပ်စိသည် ရှိုက်လျက်ရှိုက် လျက် “မသိဘူး”ဟုဆိုလေသည်။ အဖေ အမေ မသိဘူးဆိုသောအဖြေမှာ လီလီနှင့်မိုက်ကယ် အဖို့ ရယ်စရာကောင်းလှ၍ သူမသိဘူး... အားရပါးရ ရယ်ကြသည်။ “မာမီ...အရူးမလေး “နောက်တခါမေးလို့များ နော်...သူ့ မဖြေဘဲ အဖေအမေ အရူးမလေး..ဟုပြောကြ၏
ကပ်နေရင်...ဟောဒီမှာ ကြည့်ထား”ခင်မမသည် သူ၏ မို့ဖောင်းတုပ်ခိုင်သော လက်ဝါးကို ထောင်ပြသဖြင့် ညှပ်စိသည် မျက်လုံးကလေး ပေကလပ်ဖြင့် ကြည့်လျက်ရှိုက်နေလေသည်။ ညှပ်စိသည် သူ၏ဇာတိကို ပြောပြတတ်ဖို့နေနေသာသာ သူ့မိဘများကိုပင် မည်သူမည်ဝါမသိရိုးအမှန်ဖြစ်၏ သိချင် စိတ်လည်းမဖြစ်မိပေ။ လူမှန်းသိတတ်စအဖိုးကြီးတယောက်နှင့် တူတူနေခဲ့ဖူးသည့် ဘ၀ကိုလည်း ပြန်လည်၍ သတိရချင်သည့် အခါမှသတိရလေသည်။ အဖိုးကြီးရုပ်ကိုလည်း တော့ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဇ၀ဇ၀ါမှတ်မိသည်။ထို့နောက်အမယ်ကြီး နောက်ဆုံး ထိုမိန်း ထိုမိန်းမကြီး မကြီးသည် နှင့် နေခဲ့ရသည်ကိုသာ ကောင်း
တယောက်နှင့် မိန်းမကြီးတယောကကိုသိသည်။ အမယ်ကြီးမှာ ၀ါးခြမ်းပြားနှင့် အရှိုးထအောင် အရိုက်မခံခဲ့ရချေ။ တော့သည်။ ကောင်းမှတ်မိ မိမိအာ ခြောက်လလောက်မွေးထာပြီး
ငွေ၃၀ကျပ် နှင့် ရောင်းစားလိုက်ပုံကို ဂဃဂဏ မသိလိုက်၊ မိမိကို ခေါ်သွားသည် ငွေစက္ကူ ယူလိုက်သည်။ ကားထဲထည့်လိုက်သည်၊ ဒါလောက်သိသော အသိကလေး သည်လည်း နောင်ကာလ ကြာမြင့်ခဲ့လျှင် သိချင်မှ သိလေတော့မည်။ ညှပ်စိမှာ လီလီနှင့် မိုက်ကယ်ကို မုန်းသွားလေသည်။ ခင်မမကို ကြောက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သူနှင့်မျှ မျက်နှာချင်း မဆိုင်လိုတော့ဘဲ အိပ်ခန်းတွင်းရှိ ကုတင်၊ မှန်တင်ခုံ၊ အ၀တ်ဘီဒို၊ပန်ကာ စသည့်အရာဝတ္တု ပစ္စည်းများကို ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ရှောက်ကြည့်နေလျက် တချက် တချက်သာ ရှိုက်သံထက်နေ၏“လီလီ...သူ့ကို ဒေါ်ဒေါင်းရင်ဆီခေါ်သွား၊ မီးဖိုထဲမှာ ထား လိုက်၊ ပက်ွဂီရော...ပက်ဂီ” မိုက်ကယ်သည် ကုတင်ပေါ်မှ ခုန်ချလိုက်ကာ၊ အခန်းဝသို့ ပြေးသွားလျက် “ပက်ဂီ....ပက်ဂီ”ဟု သံကုန်ဟစ်၍ ခေါ်လေ၏ အမွှေးစုတ်ဖွားဖြင့် ပုပု လုံးလုံး ခွေးက လေးသည် အခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်လာသည်။ မိုက်ကယ်သည် ဂုတ်ကညှစ်၍ မ ယူလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့လှမ်းပစ်တင်လိုက်သည်။
“ဟဲ့...ဟဲ့...သေတော့မှာဘဲ” ခင်မမမှာ မျက်လုံးမျက်ဆန်ပြူးကာ “ပက်ဂီဖို့နို့ထမင်း ခွေးကလေးကို ကြိုပေးဘို့ မွေ့ရာပေါ်မှသွားကောက်ယူ၍ အောက်သို့ချလျက်” ဒေါ်ဒေါင်းရင်ကို...ပြောလိုက်နော်”ဟု
မှာလိုက်သည်။ လီလီသည် ညှပ်စိအား “လာခဲ့” ဟုဆိုကာ ရှေ့က အရင်ထွက်သားလေသည်။ွညှပ်စိသည် ခွေးကလေးကို မျက်စိကျနေ ကာ နှစ်သသက်စွာဖြင့်လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နှင့် လိုက်သွားလေ၏ ဟာများ ဒေါ်ဒေါင်းရင်သည် ခင်မမတို့ပြန်ရောက်၍ တခါးဖွင့်ပေးကတည်းက ဟောက်လိုက်သည်။ ညှပ်စိကို စပါးမွှေးစူးသွားလေ၏ လီလီနှင့်ညှပ်စိ တို့ မီးဖိုထသို့ ၀င်လာကြလျှင် “ဒီလောက်ဲဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာရလဲ မသိပါဘူးတော်...”ဟု ဆီး၍ ညှပ်စိသည် လူဖြစ်သည် လူဖြစ်လာကတည်းက ဘယ်သူ့မျက်နှာသာပေးမှ မခံရဘူးခဲ့ပေ၊ မျက်စောင်းဒဏ်ကို ယဉ်ပါးနေကာ ခံနိုင် ရည်ရှိပြီးသား ဖြစ်သည်။ မီးဖိုထဲရှိ ထင်းပုံနားတွင် ထိုင်ချကာ ဒေါ်ဒေါင်းရင်ကိုသာ ငေးကြည့်နေလေ၏ ဒေါ်ဒေါင်းရင်မှာ လက်မအားအောင် အလုပ်များနေသည်။ ညစာအတွက်မှီအောင် ကတန်းကမန်း လုပ်ကိုင်နေရသည်။ မီးဖိုပေါ်မှ ဟင်းအိုးနံ့သည် ညှပ်စိအားဒုက္ခပေးနေသည်။ ညှပ်စိသည် ဟင်းနံ့ဖြင့် သရေယိုနေကာ ပါးစမ်တပြင်ပြင် လုပ်လျက်ငတ်မွတ်ဆာလောင်နေလေ၏ ခင်မမသည် အလှပြင်ကာ သ ပြီးသွားပြီမောင်တော်လာချိန်နီးပြီမို့ဆီးကြိုတော့မည်။ လီလီနှင့်မိုက်ကယ်တို့ကိုလည်းရေမိုးချိုးပေးထားပြီးပြီ။ မောင်ပြန်လာလျှင် တအိမ်လုံးရှင်းနေမှ လှနေမှ ကြိုက်သည်။ အလှပြင်ပြီး အမြင်မတော်တာကလေးတွေ ရှောက်သိမ်းနေရသည်။ အပြင်ဘက်တွင် မှောင်ကျ၍ လာချေပြီ။ အိမ်နီးတ၀ိုက်ခြံများမှ ထွန်းထားသော မီးလက်ကို လှမ်းမြင်ရသည်။ ခင်မမသည်ပြတင်းပေါက်တွင်ရပ်ကာလမ်းဘက်သို့မျှော်လေ၏။ အုံး... ဗိုလ်မှူးကတော်ရဲ့” မီးဖိုထဲမှ ပြေးထွက်လာသော သို့သော်ကြယ်ပွင့်များကား ဒေါ်ဒေါင်းရင်သည် ခင်မမ
ပြာမှိုင်းနက်မှောင်သော ကောင်းကင်တခွင် လုံးတွင် တဖျက်ဖျက်တောက်နေကြသည်။ “လုပ်ပါ အနီးတ၀ိုက်သို့ မရောက်ခင် အဝေးကြီးက အော်ပြောရင်း ပြေး ထွက်လာသည်။ ခင်မမလည်း တဒိတ်ဒိတ်ခုန်သွားသော ရင်ဖြင့် ဒေါ်ဒေါင်းရင်ဘက်သို့ လှည့်လိုက်ကာ “အို...ဘာဖြစ် တာလဲ”ဟု မေးလျက် ခေါင်းကိုကြီးသွားလေသည်။ “ဟိုကောင်မလေးရယ်...ခေါ်လို့မရဘူး တက်နေတယ်...” ခင်မမသည် မီးဖိုထဲသို့ ၀င်ပြေးသွားလေသည်။ လီလီနှင့်မိုက်ကယ်တို့လည်း အနောက်မှ ပြေးလိုက်ကြသည်။ ညှပ်စိမှာ ရင်ထဲမှ ထင်းပုံကို အားပြုမှီကာ မျက်လုံးများ ပြူးထွက်အောင်...ကြပ်နေလျက် အင့်...အင့်ဟုမချိမဆန့် အသံထွက်နေ၏
“ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဟင်...ဘာဖြစ်တာလဲ” ခင်မမမှာ ဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိအောင် စိတ်ရှုပ် သွားသည်။ အနာအဆာ နှင့်ဟာကို အ၀ယ်မှားလာပြီဟု အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်မိကာ
ဖြစ်နိုင်လျှင် ယခုပင်ပြန်ပို့ လိုက်ချင်တော့သည်။ ခင်မမသည် တောက်တချက်ခေါက်လျက် “ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ” ဟု ဒေါ်ဒေါင်းရင် ဘက်သို့ လှည့်မေးလိုက်သည်။“ကျမ ချက်နေတာ ဘေးကနေပြီးဆာတယ်၊ ထမင်းကြမ်းတွေ ထမင်းပေးစားပါနဲ့ တပူပူတောင်းနေလို့ မနက်ကကျန်တဲ့ တဇလုံလုံ ဇလုံထဲထည့်ပြီး ငါးပိကြော်တွေ ပုံပေးလိုက်တယ်၊
ပြောင်နေအောင်စားပြီး အဲသလို ခေါ်မရ ပြုမရ အင့်...အင့်နဲ့ ဖြစ်နေတာဘဲ...” ခင်မမသည် ခါးထောက်၍ ရပ်ကြည့်နေရာမှ ဒေါ်ဒေါင်းရင်ကို တလှည့်ဒေါသအရောင်များ ထွက်လာသော မျက်လုံးဖြင့် စိမ်းစိမ်းကြည့်လိုက်ကာ မချိမဆန့် ညှပ်စိနားသို့ သွားပြီးခြေထောက်နှင့်ကျောက်ကာ ညှပ်စိသည် မထူးနိုင်ဘဲ အင့်. ခေါ်လိုက်၏“ညှပ်စိ” ဝေဒနာခံစားနေရသော
..အင့်ဟုသာအော်မည်နေ၏ “ရှင့်နှယ်ရှင်...ဇလုံထဲ တာမဟုတ်ဘူးရှင့်၊ ထမင်းတွေဘယ်လောက်များ သိရဲ့လား” ဒေါ်ဒေါင်းရင်မှာ ထည့်ပေးလိုက်သလဲ... ဆိုးဆိုးဖြင့် နေစရာမရှိအောင် တက်နေ အော်ငေါက် ဖြစ်သွားကာ
“ဗိုလ်မှူးကတော်ရယ်...ဆာတယ်ဆိုလို့ ကျွေးမိတာပါ...”ဟု တုန်တုန်ယင်ယင်တောင်းပန်ရင်း “အငတ်မလေးသေတာ အေးတယ်”ဟု စိတ်ထက ကျိန်ဆလိက်သည်။ “သူ့ပါးစပ်ထဲ လက်ညှိုဲးဲုထိုးသွင်းပြီး နှိုက်အန်မှ ဖြစ်မှာ...” လီလီနှင့်မိုက်ကယ်သည်ဒေါ်ဒေါင်းရင်၏လက်ကို မျက် တောင်မခတ်ကြည့်နေကြသည်။ လက်ညှိုးတချောင်းတည်း ထုတ်၍ မျက်နှာနားကပ်သားသွောဒေါ်ဒေါင်းရင်၏ လက်ညှိုးမှာ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကိုချိန်လျက် အနားကပ်သွားသည့် ပုံသဏ္ဍန်လို ကလေး နှစ်ယောက်စလုံး ရင်ဖိုနေကြသည်။ ဒေါ်ဒေါင်းရင်မှာ နောက်ဖေး အိုးကိုသွန်ဆေးပေးဖို့ရာ ၀န်မလေး သော်လည်း ညှပ်စိပါးစပ်ထဲ လက်ထိုးနှုက်ရန် နှလုံး နာမိသည်။ “ဟ...ဟ ဆို...ဟ”လက်တဖက်က ညှပ်စိပုခုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရမ်းကာ တဘက်လက်က လုပ်နေလျက် အသဲခိုက်အောင် လိုက်သည်။ ထိုးနှိုက်ပေးနေစဉ် ညှိုးချိန်လျက် မူးလာ၍ ပါးကို အတင်းဟခိုင်း၏။ ဟပေးလိုက်ရသည်။ ထဲက ညှပ်စိသည် ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကလိလျက် ခင်မမတို့ ထိုးအန် “ဗိုင်းဒါ အာခေါင်ထဲတွင်
ထွက်လာသောအသံများသည် ကျလာကာ ဗွက်ကနဲ
ွ မလေး..” ဟု အသံ ထွက်သားလေ၏ညှပ်စိမှာ ဆာသလောက် စားရသည်နှင့်မျှ မကာမိချေ။ သူ့အားတယောက်တခွန်းဝိုင်း၍ ကျိန်ဆဲဆူပွက်နေကြသော အသံ များမှာ နားကို အူနေတော့ သည်။ ညှပ်စိတကိုယ်လုံးတွင် ၃လမျှသောအချိန်အတောအတွင်းအမှတ်အမျုိုးမျိုးထင်ခဲ့၏။ ဖနောင့်ရာ၊ လက်ရာ၊ လက်ဝါးရာ သနပ်ခါးတုံး၊တံမြက်စည်း အမျိုးပေါင်း စုံလင်လှပေသည်။ ၎င်းတို့အနက် ပန်းကန်နှင့် ခုတထားသည့် မိုက်ကယ်၏လက်ချက်မှာ နဖူးတွင် လက်တ်ဆစ်ခန့် အမာရွက်ထင် နေသည်။ လီလီ ဆိတ်ထားသော လက်သရာတို့ကာဲး
တကိုယ်လုံးအနှံအပြားဖြစ်သည်။ လီလီတို့ဆော့ကစားနေကြလျှင် ဖန်တရာတေနေပြီ။ မသီဝံ့ချေ။ အနားကပ်သွားလျှင်ထိုးရိုက်ဆိတ်လွှတ်လိုက်ကြသည်။ ရန်ဖြစ်၍ ကွဲသွားမှတဘက်ဘက်မှ အစားဝင် မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကစားရင်း ထိုကြောင့်သူက ညှပ်စိမှာဝင်ပါချင်လာတော့သည်။ ခင်မမခိုင်းထားသည့် ညှပ်စိသည်အနားသို့ပင်
တောက်တိုမယ်ရ အလုပ်များကို ထားပစ်ခဲ့ကာဝင်ပါဆော့နေသဖြင့် ခင်မမရိုက်ပေါင်းလည်း မောင်နှစ်မနှစ်ယောက်သင့်မြတ်နေကြလျှင်
စားချင်လျှင် မောင်နှမနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်အောင်စောင့်နေရသည်။ ရန်မဖြစ်နိုင်ကြသေးလျှင် ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးချင်သော စိတ်သည် ပေါ်လာလေသည်။ ညှပ်စိ၏ အသိဥာဏ်များကား ခင်မမပင်သြချရလောက်အောင် တိုးတက်လာခဲ့၏ နို့ဆီဘူးကို ခိုးစားလျှင်ရမှန်း သိတတ် လာ၏။ မုန့်သေတ္တာခိုးစားရမှန်းလည်း နားလည်နေ၏။ နောက်ဆုံးပက်ဂီ၏ခွက်ထဲမှ ကော်ဖီရေ ပင် လစ်လျှင်ယူသောက် လိုက်တော့သည်။ ညှပ်စိ၏အလုပ်ကား ဇလုံကလေးထဲတွင် နံနက်အိပ်ရာထ ရေထည့်ကာ ဖုံသုတ်၊ များကို သူ့အရပ်နှင့်မှီသည့် တော့ကာ နေရာတိုင်းကို မပြောမချင်း ဖုန်သုတ်ရ၏။ သွေးနေရ၏။
အ၀တ်ပိုင်းစနှင့် ကြမ်းကိုတချောင်းစီ တချောင်းစီတိုက်ပွတ်ရ၏ပြီးလျှင် သနပ်ခါးတုံးကိုင်ရ တော်ပြီဟု သူနှင့်ဆိုင်သောအလုပ်မှာ ခေါ်ခိုင်းသမျှ ကြမ်းတိုက်၊ သနပ်ခါးသွေးဟု မယ်မယ်ရရ ဆိုငြားလည်း ဖုံသုတ်နေစဉ် “ညှပ်စိဖိနပ်ပေး” “ညှပ်စိရေတခွက်”ဟု ထလုပ်ပေးနေရ၏ ပိတ်ကန်ခြင်းကို လီလီနှင့်မိုက်ကယ်တို့ကျောင်းသွားခါးနီး ဘိနပ်စီးနေစဉ်“ညှပ်စိ...ညှပ်စိ”ဟု ခံလိုက်ကာခေါ်သံကြားရာသို့ အမြန် ခင်မမတကြော်အော်ခေါ်နေခြင်းကို ရောက်အောင်ထ ပြေးသွားရ လို့ပါ” ဟု
ရှေ့မှောက်သို့ပြေးသွားမှ သက်သာရာ ရတော့မည်ဖြစ်တော့သဖြင့် ဘိနပ်ကိုအပြီးစီးမပေးခဲ့၍ သည်။“ခေါ်နေတာမကြားဘူးလား”ဟု ဆီးငေါက်၍ “ကို့ကို့ဖိနပ်ကြိုးချည်နေ
လျှောက်လဲချက်ပေးသည့်တိုင် “နောက် ကိုငါခေါ်ရင် ချက်ချင်းလာခဲ့......မှတ်” ပြောကာ မှတ်မိအောင် ဗိုက်ကြောကို လိမ်စွဲထားသဖြင့် “မှတ်ပါဘီ...မှတ်ပါဘီ” ဟုလက်မလွှတ်မချင်း တွန့်လိမ် ကောက်ကွေးလျက် တခုခုယူစရာ ပြောနေတော့၏ စေလွှတ်လိုက်လျှင် ရောက်စတွင် နောက်ဖေးသို့ လူကြီးက မရောက်ခင် အိမ်ရှေ့မှ လီလီတို့ နောက်ဖေးသို့
လမ်းကကြားဖြတ်ခိုင်းသမျှအလုပ်ကို သွားလုပ်ပေး နေ၏ မလုပ်ဘဲဆင်ခြေ ပေးနေလျှင် ရိုက်တတ်သည်ကို သိ၍ အနာမခံချင်သဖြင့် သူတို့ခိုင်းတာ လုပ်ပေးပြီးမှ လူကြီးခိုင်းသော အလုပ်ကို ညှပ်စိသည် ကခိုင်းလျှင် သွားလုပ်ရာတွင်ကြာနေ၍ ထိုအမှတ်သညာကို ကြားက ဘယ်သူက ကြာရမ ဖြတ်ခိုင်းခိုင်း လားဟု အသေအလဲအချခံ အသေအလဲအချခံရ ရပြန်၏။ မည်သူ ရရှိပြီးသည့်နောက်ပိုင်း၌
တယောက်တချက် ပုတ်ကြရိုက်ကြသည်ကို သက်သက်သာသာထား၍ ခံသားကာ အသွေ
အလဲချမည့်သူက ခိုင်းသောအလုပ်ကို ဦးထိပ်ထား၍ လုပ်တတ်လေသည်။ ညှပ်စိမှာ တစ် နေရာတွင်ကြာကြာထိုင်နေရသည်ဟုမရှိပေ။ အိမ်ထဲတင်ွဟိုကညှပ်စိသည်ကညှပ်စိဖြင့် တခေါ်ထဲ ခေါ် တခိုင်းထဲခိုင်းနေကြသည်။
တောက်တောက် တောက်တောက်နှင့် ဖင်မချ ရှောက်သွားလုပ်ပေးနေရသည်။ နံနက်စောစော မီးဖိုချောင်ထတွင် ထမင်းချက်မိန်းမကြီးပေးသော သံပန်းကန်ပြားနှင့်ထမင်းကြမ်း ဆီဆမ်ဲးစားရသည့် အချိန်၊ မနက်စာ၊ ညစာ စားနေသည့်အချိန် ထိုအချိန်လောက်သာ စိတ်ချလက်ချ ကောင်းကောင်း ထိုင်ချရသော အချိန်ဖြစ်၏ တနေ့လုံး မောဟိုက် နွမ်းနယ်လှသဖြင့် ညမီးထွန်း ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားသောအချိန်သည် ငိုက်နေ၏။ မီးထွန်းချိန်ဖြစ်သည်။ ညှပ်စိသည်
တာနှင့် ငိုက်မျည်းလာ၍ အရိုက်ခံရတော့သည်။ အလုပ်ပေးထား၍ ထိုင်လုပ်နေလျှင် လည်း မြင်သူတိုင်း၏အရိုက်ခံရသည်၊ ဟိုနားသည်နားခိုင်း၍ လျှောက်သွားလျှင်လည်း မတ်တတ်ငိုက်လျှောက်သွားတတ်သဖြင့် တွေ့သူတိုင်းက ရိုက်ပစ်လိုက်သည်။ လီလီနှင့်မိုက် ကယ်တို့ မအိပ်ခင်မအိပ်ရပေ။ တယောက်စီထိုင်၍ ကုတ်ပေးနေရလေသည်။ ကုတ်နေတုန်း ငိုက် မိလျှင် ထနှိပ်စက် ကြပြန်သည်။ ညှပ်စိဆိုလျှင် တအိမ်လုံးရိုက်ချင်လွန်း၍ လက်ယား နေကြသည်။ ညှပ်စိ အပြစ်အနာအဆာ ပြောရမည်ဆိုလျှင် မရ မတွက်နိုင်အောင် များပြားလွန်း၍ ညှပ်စိကို
မမောမချင်းပြောလို့ လှည့်ဖျက်ပြီး အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ အခြေအနေ
လွှဲချလိုက်သည်၊ ဒေါ်ဒေါင်းရင် ပန်းကန်ခွဲမိလျှင် ညှပ်စိကို လွှဲချလိုက်သည်။ ရေဒီယိုခလုတ် မိုက်ကယ်သည် ချော့မော့လျက် သို့ရောက်မှန်းမသိ ခင်မမသည် လာလျှင် မောင်တော်အ စောစောကမျက် ခင့်ကို ချိန်နှင့်ပြန်မရောက် ၍ မျက်နှာပုပ်သိုးကာ မောင်ကအလည်လန်၊ အမူးလွန်ရာမှ ပြန်လာပြီွးမျက်နှာရွှင်ပြကြည်သာ ရောက်လာကြနေသည်။ နှာပုပ်သိုးရခြင်းသည်ပင် မောင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ “ညှပ်စိကြောင့်ပါ” ဟုလွှပုံချတတ်သော
သိပ်စိတ်ဆင်းရဲရအောင် လုပ်တာဘဲ၊ ခင်လဲ မောလှပါပြီမောင်ရယ်၊ မောင့်ကိုစိတ်ဆိုးလို့ မဟုတ်ပါဘူး...၊ ခင်စိတ်ညစ်လို့ပါ...”ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မောင်သည် ဒေါသွူပုန်ထ လာချေ၏။ “ခင်က အမောမခံပါနဲ့လို့ မောင်ပြောနေတာ၊ နေမကောင်းဖြစ်သားရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်ပါ့မလဲ...”ဟု စိုးရိမ်ကြီးစွာ ယုယနှစ်သိမ့်ရင်းမှ သန်းခေါင်သန်းလွဲ ကျော်အိပ် ပျော်နေသော ညှပ်စိကိုနှိုးကာ ခင့်အတွက်နာကျည်းလျက် ပြာပြာသလဲ ချက်ချင်းအ ရေးယူပြလိုက်သည်။ သည်အခါမျိုး တွင် မူးမူးရူးရူးရိုက် နေသော စစ်ဗိုလ်၏ရှေ့မှောက်၌ တရေးနိုးကျောကော့နေရတော့၏။ ညှပ်စိသည် အိမ်တွင်မရှိမဖြစ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုကဲ့သို့ အဘက်ဘက်က အသုံးဝင်လာသည်။ စက္ကူစုတ်များပစ်ထည့်ရာအမှိုက်ခြင်းတောင်း ကလေး ကဲ့သို့ အားလုံး၏အပြစ်များကို စုပုံချပစ်ရာ အမှိုက်ပုံးသဖွယ်အသုံးချနိုင်လာကြသည်။
လူသာလျှင်ညှပ်စိဖြစ်နေလျက် အိမ်ထဲ၌ သူများမထမ်း နိုင်သောတာဝန်တွေကို တဦးတည်း ခေါင်းနှင့် ရွက်ထမ်းထား၏ မင်းကတော်များအိမ်လည်လျှင် ညှပ်စိမှာအရေးပါသော ဧရာမ ညှပ်စိဖြစ်၏။ ညှပ်စိအကြောင်းကို မင်းကတော်များ ပြီး၊ မပျင်းအောင် တခမ်းတနားကြီး တုန်လာ ပြောပြဧည့်ခံနိုင်သည်။ ဗီဇကိုဖျောက် လို့မရဘူး... ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် ဘယ်လောက်တေတေ သူ့အကျင့်ဆိုးတွေဲစဉ်းစားကြည့်တော့၊ အောက်မေ့မိတယ်” ပေတယ်”ဟ်ုအလိုရှိလျှင်ခိုင်းရအောင် သူ့အကြောင်းကိုသူ အိပ်ချင်လာမိသည်။ တောင်ကရောက်လာ လီလီဝတ်သော ထိုနေ့အဘို့တွင် တစ်ခုမှမပါချေ။တခါတရံ မဖျောက်ဘူး...ခင့်မှာသာမော ပစ်လိုက်ရမှာလဲအခက်၊ ခင်မို့လို့ ရင်တွေဘာတွေကို တာဘဲ၊လက်အံသာသေပါရော၊ တာလေ...တခါတခါတော့ သူ့မှာတော့သည်းခြေမရှိတဲ့အတိုင်းဘဲ မွေးရမှာလည်းအခက်၊ မိတာ မင်းကတော်ဘ
အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက် စိတ်ရှည်ပါ ညှပ်စိသည အကောင်း
မြွေပွေးခါးပိုက်ထားရတာဘဲလို့ ချီးကျူးလိုက်သည်။ သူကြာရတိုင်း ကို
အသင့်ဒူးတုပ်ထိုင်စောင့်နေရသဖြင့် နားထောင်ရင်း လိပ်ပြာကောင်
သူ့အကြောင်းကိုသူမကြားမိဘဲ ထွေးလုံး ရစ်ပတ်
ကလေးများ၊ ငှက်ကလေးများ သို့မဟုတ် ရေဒီယိုထဲမှ သီချင်းစကားလုံးများသည် ခေါင်းထဲသို့ မြောက်က၀င်လာဖြင့် ဖြစ်နေတတ်သည်။ သောစိတ်ဝင်လာလျှင် ကိုင်တကြည့်ကြည့်ဖြင့် ဂါဝန်အစုတ်အပြတ် ညှပ်စိသည် ကလေးကို ၀တ်ကြည့်ချင်
လူလစ်လျှင်မှန်ရှေ့၌ ကိုယ်နင့် ကပြာကယာ ကပ်ကြည့်ကာ အားရကျေ နပ်နေတော့သည်။ှခင်မမသည် ညှပ်စိကို ရှင်မီးအင်္ကျီ၊တလိုင်းပေါက်သရက်ထည် အင်္ကျီနှင့်လုံချည် တထည်ပေးထား၏ ကတုံးနှင့်ဆံတိုသည် လီလီနှင့် အစေခံမကလေး၏ အင်္ဂါတစ်ရပ်ဖြစ်၏ အစေခံ၏ ကတုံးဆံတို နှင့် သရက်ထည်တလိုင်းပေါက်၊ ညီညွတ်ပေသည်။ ညှပ်စိအဘို့ အဆင်မရှိထမီတိုနံ့နံ့သည် မိုက်ကယ်တို့ နေ့စဉ်မြင်နေရသဖြင့် ရုပ်လကဏ္ခာ
တခါတရံပေါ်လာမိသည်။ လီလီတို့ကော်ဖီသောက်လည်းသောက်ချင်သည် ချောကလက်စားလည်း စားချင်လာသည်။ ဖဲကြိုးကလေးများ မြင်လျှင် လည်း သူဆံပင်ထားချင်လာသည်။ စားချင်မှု ၊သောက်မှု၊ လှချင်မှုကြောင့် မစားရ၍ ခိုးစား၊ခိုးသောက် ခိုးလှချင်မိရာ၊ ထိုအပြစ်သည် တကိုယ်လုံး၌ အပိန်းအဖုထအောင် အထုအရိုက် အကန် အကျောက်ခံရရုံသာမက အကျင့်မကောင်းဘူး ဟူသော မှတ်ပုံတင်တံဆိပ်ပေးထားကြ၏။ ဒေါ်ဒေါင်းရင်က“ နင်ဒီမှာပျော်ရဲ့လား”ဟု
“သိပ်ပျော်တာဘဲ”ဟုဖြေသည်။ တခါတွင်လည်း ညှပ်စိသည် အချိန်မဟုတ်သော ညနေစောင်းတွင် လူမရှိဘူးအထင်နှင့် ရေဒီ ယိုခလုတ်ကို ဖွင့်လှည့်မိ၏ “ဖြန်း” ကနဲအသံ နှင့်အတူ လက်တဘက်သည် အရှိန်ပြင်း စွာပါးပေါ်သို့ကျလာကာ ဖဲ့ချလျှင် ပဲ့ကျလုမတတ် ရဲရဲနီယောင်သွား လေသည်။ ထိုဒဏ်ရာ မျိုး ကို ညှပ်စိသည် အမှတ်မရနိုင်။ ရေဒီယိုမှ မြန်မာနိုင်ငံတော်အသံလွှဌာနမှ ၂၃ဒဿမ ၄၄ လှိုင်း လတ် ၃၁၄ မီတာများမှဟူ၍ ရေဒီယိုအသံကြား လိုက်ရလျှင် မျက်ရည် တိတ်လျက် ဖယောင်းထိသောမီးကဲ့သို့အရည်ပျော်သားလေ၏ွ“ဂွတ်မောနင်းဒယ်ဒီ...ဂွတ်နိုက်ဒယ်ဒီ” စသည်ဖြင့် အိပ်ထအိပ်ရာဝင် လီလီတို့ပြောကြသော အင်္ဂလိပ်စကား သံ ကိုသာ အလွန်တရာ နားငြီးမိသည်။ ညှပ်စိနှင့် သွေးသားလိုချစ်ခင် သောအဖော်ကား ပက်ဂီဖြစ်သည်။ မိုက်ကယ်၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ကို ခံရသော ပက်ဂီသည်ညှပ်စိပေါင်ပေါ်တွင် တက်ခွေထိုင်ကာ ငြိမ်ဝပ်လျက်၊ဒဏ်ရာခံစားနေတတ်၏ ညှပ်စိ ၏ လက်ကလေးဖြင့် သော်လည်း ကောင်း ပါးကလေးဖြင့် သော်လည်း ကောင်း ပွတ်သပ် ယုယပေးခြင်းဖြင့် အနာသက်သာရာရမှုကို နားလည်ထားသော ပက်ဂီသည် မိုက်ကယ် လက် ချက်ဖြင့် နာကျင်တိုင်း ညှပ်စိဆီသို့ ပြေးလာတတ်သည်။ ညှပ်စိ ထမင်းစား နေခိုက် ပက်ဂီ သည် မီးဖိုထဲသို့ ပြေးဝင်လာသည်။ညှပ်စိအား ထမင်းကောင်းကောင်းစားခွင့် မပေးဘဲ ကုတ် ဖဲ့ဆွဲကိုက်ကစားနေတတ်၏။ “ဖယ်လေ...သွား....နင်စားပြီးသားဘဲ သွား”ဟုပြေကာ တွန်းဖယ်၍ ပစ် သည့်တိုင် ပက်ဂီသည် ညှပ်စိအနားမှ လာကာ မခွာဘဲ ပွတ်သီးပွတ်သတ်လုပ် အတင်းတွန်းဖယ် ညှပ်စိသည် နေလေ၏“သူများထက်ကောင်းကောင်း ပစ်သည် ပက်ဂီသည် တွန်းဖယ် စားရပြီးတော့ သူများစားရင် လာရှုတာဘဲ...သွား” ညှပ်စိသည် ရှုပ်ရမလားဟု စိတ်မရှည်ဖြစ် နှုတ်ကရန်တွေ့ရင်း လိုက်သောနေရာ၌ ညှပ်စိနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေကာ လျှာတန်းလန်းဖြင့် ညှပ်စိမျက်နှာကို အငူသားကြည့်နေပေသည်။ သွင်းစားနေရင်း ညှပ်စိသည် ထမင်းကိုဆုပ်၍ ပက်ဂီမျှော် ပက်ဂီရှေ့၌ သံပန်းကန်ထဲမှထမင်းကို မျိုမကျဖြစ်လာကာ တချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် “ရော့...မြန်မြန်စား”ဟု သူ့နောက်၌ ပလုတ်ပလောင်း နင်လာလေသည်။ သံပန်းကန်ထဲမှ ဆိုလိုက်သည်။ ခြေဖျား ကြည့်နေပုံကြောင့် ချပုံပေးလိုက်ကာ ပြန်ဝင်လာလေရာ
မီးဖိုထဲသို့ ခြေဖျားထောက်၍ ၀င်လာသော လီလီသည် ခြေဖျားထောက်၍ ပြေးထွက်သာွးသည်။တဖန်ခြေဖျားထောက်၍ ထောက်လျက်ပါလာလေသည်။ ခင်မမလည်း
ညှပ်စိသည်ကျောမှကန် မှောက်ရက်ကျသွားလေရာ ပက်ဂီကို ချကျွေးတယ်၊ ကျွေးအုံးမလားဟဲ့
နားသယ်မှသွေးများ ငေါက်တောက်ပန်း ထွက်လာလေသည်။ “သပေါက်မလေး.. .ကြည စမ်း...ငါးပိတွေငရုတ်သီးတွေနဲ့ ဒါကြောင့်ပက်ဂီ ....ကျွေးအုံးမလား...” ဘ၀ပြဿနာကို လျှင် နယ်ထားတဲ့ ထမင်းကို ဟာဝမ်းပျက်နေတာ...နောက်တခါနင်စားတဲ့ ညှပ်စိသည် ဆက်လက်၍ အစာကို
နားမထောင်လိုပေ။ သည်လိုကျွေးလျှင် ဘာဖြစ်မည်ကို တွက်ထားပြီးသား ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဘာမှန်းမသိသော်လည်း ညှပ်စိသည် ပက်ဂီ၏ဘ၀ကို ဖြစ်သည်။ ရရှိလိုက်သော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များသည် ခါးတိုင်းလိုဒီနေရာရိုက်၊ ဟိုနေရာကျ ပျောက်သော်လည်းယနေ့မူအနာက မရနိုင်အောင် နာကျည်းသည်ထက် ညှပ်စိသည် စိတ်ကနာကျည်းချက်ကို ပက်ဂီကိုကြည့်မရအောင် ဖျောက်ဖျက်၍ နာကျင်နေသည်။
ဖြစ်သားလေသည်။ွပက်ဂီနှင့်အတူတူ ပလူးနေချင်သောစိတ်များ ကုန်ခန်းသွားသည်။ သူ့ဘ၀နှင့်မတူသော
ပက်ဂီကိုမြင်လျှင် အဝေးက ရှောင်ချင်လေသည်။ ပက်ဂီအား ယုယုယယပိုက်ထွေးလျက် ခင်မမ သန်းရှာပေးနေပုံကို တထောင့်မှ လှမ်းကြည့်နေသော ညှပ်စိ၏ရင်မှာ ခုန်နေ ကာ အသက်ရှူလည်းမမှန်တော့ပေ။ “ကြားရဲ့လား ငါပြောတာ...ပြန်လာရင်အကုန်လုံးပြီးပစေ၊ ပက်ဂီကိုလဲရေချိုးပေးလိုက်
နင့်နားသယ်က အနာက နနွင်းလိမ်းထား...” ညှပ်စိသည် ညှိုးငယ်စွာဖြင့် ခင်မမမျက်နှာကို တွေတွေကလေးကြည့်နေလေ၏ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ သားအမိသာအဖလေွးယောက် ဘုရားဖူး သွားကြသည်။ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်းပင်ညှပ်စိသည် ပက်ဂီနှင့်လတ်လပ်စွာ အားရပါးရ မြူးတူးခုန်ပေါက် ကစားနေကြမြဲဖြစ်သည်။ ယခု တကြိမ်၌ “ပက်ဂီ ကို မုန်းနေ သဖြင့် ပက်ဂီနှင့်နေရစ်ခဲ့ရန် ၀မ်းမသာနိုင်ဘဲသူတိုနှင့်အတူ ခေါ်သွား စေချင်သော စိတ်ဖြင့် ပက်ဂီကျန်ရစ်ခဲ့တာစိတ်ရှုပ်သွားသည်။ ကားမထွက်ခင် မျက်မှောင်ကြုတ်၍ အောင်လုပ်ထား ဒေါ်ဒေါင်းရင်၏ ဒေါ်ဒေါင်းရင် မိုက်ကယ်က ကားထဲမှ လက်သီးပြသွားသည်၊ “ဟဲ့...ညှပ်စိ ကမြင်းမနေနဲ့ လီလီကရှာထုတ်
ပြောင်ပြသွားသည်။ ခါးတိုင်းရီ၍ ငေးကြည့်ကျန်ရစ်ခဲ့မြဲ ဖြစ်သော်လည်း ယခုမူမကြည်မသာ ရှုံ့ကြည့်နေရစ်ခဲ့၏ နော်၊ ငါသွားခွေးနဲ့လဲ အမိန်သံသည် မီးဖိုချောင်ထသိုဲ့အပြင်ကအလုပ်တွေအကုန်ပြီး ကြားရဲ့လား ကောင်မ...” အိမ်၏ တစ်ခလုံးမှမ၀င်ချေ။ ညှပ်စိသည်
ရှေ့တောင်ဘက်ဆီက သဲ့သဲ့မျှကြား လိုက်သော ဆိုင်းသံဗုံသံကိုသာ နားစိုက်လိုက်သည်။ စိထားသောတံခါးကို
အသာတွန်း၍ ဆိုင်းသံကို သည်။
ခြံထောင့်ပေတစ်ရာလမ်းမကြီးဘက်မှ ပြေးဖွင့်ပြီးနောက် အသံလာ
ခြံရှေ့ကရပ်၍လမ်းမကြီးဘက်သို့ ရာဆီသို့ လှမ်းမျှော်ရင်းခြံရှေ့ရှိ တိုးသွားနေ၏ တချက်လှည့် သွားရပ်ကြိုစောင့််
မျှော်ကြည့်နေလေသည်။ ဆိုင်းသံမှာနီးနီးကပ်ကပ်မကြားရသေးဘဲ အဝေးကသာ လာနေသေး ညှပ်စိသည် အားမလိုအာမရဖြင့် ညာဘက်လမ်းချိုးကလေးအတိုင်း ဆိုင်းသံများ တဖြည်းဖြည်း ပက်ဂီသည် ကြည့်ချင်လာပြန်သည်။ ကြည့်လိုက်သည်။ လမ်းမကြီးပေါ်သို့ တိုးကပ်လာသဖြင့် မီ ညှပ်စိအနောက်မှ တလှမ်းပြီးတလှမ်း လမ်းမကြီးပေါ်၌ ထက်ချပ် အနောက်သို့
ညှပ်စိသည် လမ်းပေါ်၌ တုံ့ရပ်လိုက်ကာ အံကိုကြိတ်လျက် ပက်ဂီ အနားရောက်အောင် စောင့်ဆိုင်းနေ၏ “သွားလေ...သွား...ပြန် နင် ငါ့နောက်မလိုက်ခဲ့နဲ့၊ ပြောတာမရဘူးလား” ညှပ်စိသည် အိမ်သို့ပြန်ရန် ပက်ဂီကို မောင်းလွှတ်နေသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်က ဆိုင်းသံ ဗုံသံများလည်း ကပ်သည်ထက် ကပ်လာ၍ မမြင်လိုက်ဘဲ လွတ်သားမှာစိုးသဖြင့် ဘယ်လွိုလုပ်ရမှန်း မသိအောင်ဖြစ်ကာ ကြံရာမရ အနားရှိ အုတ်ခဲကြီးကိုကုန်း ကောက်လိုက်၏ “သွားနော်...သွားဆိုသွား...ငါပေါက်လိုက်မယ်”ပက်ဂီသည် အုတ်နီခဲရွယ်ထားသော ညှပ်စိကို ကြည့်ကာ မှိတ်လျှက် ရဲရဲတင်းတင်းပင်တိုးကပ်လာနေသည်။ အုတ်နီခဲကိုရွယ်၍ အုတ်နီခဲနှင့် ညှပ်စိသည် သူ၏ မျက်လုံးများကို နားသယ်က မမေ့နိုင် နာလွန်း၍ တအားမြှောက်လိုက်ရာ အရှိန်လွန်ပြီး ညှပ်စိသည်
မျက်ရည်များလည်လာသည်။ အုတ်နီခဲကြီးလက်က မချသေးဘဲ ပက်ဂီကို နှာခေါင်းရှုံ့၍ကြည့် လိုက်၏ပက်ဂီသည် နောက်နောင်က ပလူးနေကျ မျက်နှာချိုအတိုင်း လျှာကလေးတစ်တစ်ဖြင့် မော့ကြည့်လျက် သူ့ခေါင်းနှင့်ညှပ်စိ ခြေထောက်ကို ၀င်ခွေ့လေသည်။ညှပ်စိသည် ငုံ၍ကြည့် ရင်း အုတ်နီခဲနှင့်ထုလိုက်လျှင် ပက်ဂီနာကျင်သွားမည့် ဝေဒနာကို တွေးသနားမိသည်။
ဘာစိတ်ဘာလက်ပေါက်သွားသည်မသိ၊ ပက်ဂီအားထုရန်ရည်ရွယ်ထားသော အုတ်နီခဲကြီးကို လမ်းပေါ်သို့ ဖုံးကနဲ မြည်အောင် လွပစ်ချလိုက်သည်။ပက်ဂီသည် ၀ုတ် ၀ုတ်နှင့်ဟောင်ကဲာဖုန်းကနဲအသံကို ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် လှည့်ပြေးလေသည်။ ညှပစိသည် ပက်ဂီကိုကြည့်မနေတော့ဘဲ လမ်းမကြီးဘက်သို့ ပြေးထွက်လာခဲ့သည် ကုလားဘိုင်စကုပ်လှည့်သော မော်တော်ကား၏ အနောက်ပိုင်းကို သီသီကလေး မှီလိုက်၍ ကားဘေး၌ ချိတ်ထားသော အရုပ်များကို ကောင်းစွာမမြင် လိုက်ရချေ။ ညှပ်စိသည် ကားနောက်မြီးကို ငေး၍ ကြည့်နေ၏ နံနက်စောစော အင်းယားကန် ဘောင်ဘက်မှ မြင့်တက်နေသောနေ လုံးသည် သူ၏ရောင် ခြည်ကိုဖြန့်လျက် ဖြော့ဖြော့ကလေး အလင်းရောင်လက် နေ၏ ပြာလင်းသော ကောင်း ကင်ကြီးသည် အမိုးကဲ့သို့ အရိပ်ပေးကာ အမိုးအောက်၌ လေသည် တညှင်းညှင်းပြန့်နေသည်။
ညှပ်စိသည် မော်တော်ကားကွယ်သားလျှင်၊ သူမျက်စေ့နှင့်တည်ရာနေလုံးကြီးကို ငေးကြည့်ွလျက် အားသစ်အင်သစ်များ ပြည့်တင်းလာသည်။ အုံနွေးနွေးနယ်ကာအသည်း နှလုံးက လေး ကို လေညှင်းသည် တဖြူးဖြူး အေးမြအားဖြည့်ပေး နေသည်။ညှပ်စိသည် သဘာဝ ၏ပိုက်ထွေးယုယမှုဖြင့် ကြည်လင်လန်းဆန်း သွားလေသည်။ လမ်းပေါ်၌ တောင်မြောက်လေးပါးကို လှည့်ငေးကြည့်ကာ အိမ်ပြန်ရန်မေ့သားလေသည်။ ဤအိမ်သို့ရောက်မှ အိမ်ပြင်ွလမ်းမကြီး ပေါ်သို့ မတ်တတ်ထွက်ရပ်ရသည့် ရှေးဦးစွာ အကြိမ်ဖြစ်သဖြင့် တောင်ဘက်က မကြီးကိုလည်းမျက်စေ့တဆုံးမျှော်ကြည့်လိုက်၏ လမ်းပေါ်၌ လူသာွးလူလာပါးနေသည်။ တောင်ဘက်၌ သာယာလှပသော ခြံ ကလေးတွေနှင့် အိမ်ကလေးတွေ ရှိကြသည်။ မြောက် ဘက်၌ တဲကုပ်ကုပ်ကလေးတွေ တဲတွင်းမှ ခလေးငိုသံ။ သူသည်ဝိုးတိုးဝါးတား ပေါ်လာသော အတွေးဆဖြင့် ငယ်ငယ်ကနေခဲ့ရသော တဲကလေးလိုလို ထင်ယောင်ထင်မှား အောက်မေ့ မိသည်။လမ်းဘေးရှိ သစ်ပင်ကြီးငယ်တို့ကား ကြည့်ရွှသော အရောင်အဆင်းဖြင့် စိုပြေလန်း ဆန်းနေကြ၏ နေရောင်ခြည်ထဲတင် သစ်ပင် ပေါ်မှ အရွက်ထွက်စ သစ်ရွက်နုနုတို့ သည်အွညွန့်တဝေေ၀၀င်းပနေကြပေသည်။ သူ့ရင်ထဲတွင် သူမသိနိုင်သော လွတ်လပ်ရေး၏ အရသာကို ပတ်ဝန်းကျင်က သူသိအောင် ဖန်တီးပေးထား၏ ဘယ်အရာကို ကြည့်ကြည့်ရေနှင့် အသစ်ဆေးထားသကဲ့သို့ ဖြူလင်းသန့် စင်သည်။ စိမ်းစိုဝင်းတောက် နေသည် ကျယ်ပြန့်၍ မျက်စေ့ တဆုံးရှိကြသော လမ်းကြီးတွေကို သူသည်မျက်စေ့ အာရုံဖြင့် လိုက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ုပြန့်ဆုံး အောင် မျှော်ငေးစိုက် ကြည့်နေလေသည်။ “ညှပ်စိရေ...ညှပ်စိ” ဆိုင်းသံမှာ နီးနီးကပ်ကပ် မကြားရသေးဘဲ အဝေးကသာလာနေသေးသည်။ရုတ်တရက်နားကို မီးပူနှင့် ကပ်လိုက်သလို ပူသားကာ၊ွထို့နောက်ထူ သွားကာ အိမ်ဘက်သို့ လှည့် မျှော်ကြည့်လိုက်သည်။ ဒေါ်ဒေါင်းရင်သည် ခြံဝတံခါးမှ မဟုတ်ဘဲ အိမ်ဝတံခါးက ခေါ်နေမှန်း သူသိသည်။ ညှပ်စိသည် အိမ်ကိုလည်း လှမ်းကြည့်၏။ လမ်းမကြီးကိုလည်း လှည့်ကြည့်ပြန်၏ ။ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေသည်။ အိမ် ဘက်ပြန်လျှင် မုချ အရိုက်အနှက်ခံရတော့မည်။ စောစောစီးစီးအသားနာမှာကို မခံချင်ပေ။ စောစောစီးစီးလည်း မငိုချင်ပေ။ တစာစာခေါ် သံများသည် အိမ်ဝကမဟုတ်ဘဲ ခြံထဲက ထွက်လာပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခွန်း ခေါ်သံ သည် သူနှင့်ကပ်သည်ထက် ကပ်လာသလို ထင်ရသည်။ ညှပ်စိသည်သူ့ ကတုံး ကလေးကို လက်ဝါးနှင့်အုပ်၍ မကြံတတ်မစည်တတ်ဖြစ်နေကာ တခုတည်းသော အသိဖြင့် ဆုံးဖြတ် ချက်ချလေ၏။ ထိုအသိကား အတားအဆီးမရှိသော လေကိုရှူရှိုက်လျက် ပိတ်ဆို့ မထားသော ဖြောင့်တန်း ရှည်လျားသည့် မြေပေါ်လမ်းမ ကြီး၌ လွတ်လတ် လပ် လပ် စိတ်ထင်သလွိုလျှောက်သွားလိုသော ဆန္ဒ၏ အသိဖြစ်သည်။ ညှပ်စိသည် ထိုလမ်းမ ကြီးအတိုင်း
တအားကြုံး၍ကဆုန်ချပြေးသွားနေလေသည်။ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
Documents Similar To Mama Lay
Kyaw Htet Chein
Soe Sithu Naing
More From phoparlay